DONEAX Smart Pulsed Ultraviolet Disinfection Robhoti, chombo chitsva chekudzivirira uye kutonga kwepfungwa yepachipatara!
Sezvo denda idzva rekorona richipinda zvishoma nezvishoma mukudzivirira uye kudzora, kune iyo nyowani korona mabayo, iyo inoshandisa madonhwe uye kuonana senzira huru yekufambisa, zano rakakosha kwazvo rekuvhara nzira yaro yekutakura inosanganisira kupfeka masiki, kufefetedza mweya, uye hutsanana nemaoko, se zvakanaka ...
DONEAX technology's pulse disinfection uye sterilization robhoti inoshandiswa kuuraya utachiona uye kuuraya hutachiona, mabhakitiriya uye superbacteria yekuvandudza kuchena kwezvakatipoteredza.
“Varwere vanowana kurapwa kuno vanowanzotadza kubatira dziviriro nekuda kwekurapwa uye vanowanzo batwa nezvirwere zvinotapukira. Hutachiona hunokonzera hutachiona hunove huchenjeri uye husingaurayiwi nemishonga inorwisa mabhakitiriya, ndosaka tichida zvombo zvitsva senge DONEAX tekinoroji doneax's pulsein s ...
Iyo inoverengeka coronavirus, iyo DONEAX chigadzirwa mubatanidzwa, inogona kuramba 2019-nCoV nechiremera.
Iyo inoverengeka coronavirus, iyo DONEAX chigadzirwa mubatanidzwa, inogona kuramba 2019-nCoV nechiremera. Iyo inoverengeka coronavirus pneumonia kuongororwa uye chirongwa chekurapa chakatangwa muna Kukadzi 3rd masikati (National Defence Health Committee) (redhiyo vhezheni yechishanu). Izvo zvigadzirwa zvigadzirwa zveShenzhen DONEAX technolog ...
Dzidza nezvekushandisa kwe | kupomba ultraviolet disinfection robhoti mune yakasarudzika wadhi yechipatara
Novel coronavirus pneumonia yakaunzira vanhu nzwisiso yakakomba yekukuvara kukuru kwezvirwere zvinotapukira munharaunda yevanhu kubva muna Zvita wegore rapfuura. Iko kiyi kune yakazara hutachiona hwekudzivirira uye kuronga kuronga kuita zvakanaka mukudzivirira kwehosha nekudzivirira uye kuchenesa patien ...
Inovandudza tekinoroji - inotsigira chipatara pfungwa - DONEAX tekinoroji zvigadzirwa zvigadzirwa zvave nekubudirira kukuru
Innovation tekinoroji inobatsira pfungwa yechipatara Musi waZvita 20, 2019, "musangano wepagore wezvekudzidza uye musangano wechishanu wesarudzo yechipatara hutachiona Professional Committee yeSenzhen Medical Association" yakabatana yakabatwa neShenzhen Medical Association uye Shenzhen University Ge ...
Huashan Hospital muShanghai yakaunza DONEAX yepamusoro yepamusoro gorati jet mweya sterilizer kuchengetedza vashandi vekurapa
Kubva pakatanga yenoverengera coronavirus mabayo, nucleic acid kuona yave nzira yakakosha yekuongorora zviitiko. Mazuva ano, nucleic acid yekuona yakave nzira inodikanwa yekuongorora zvakadzama uye kurapwa muchipatara. Kuumbwa kwevashandi munzvimbo ino kwakaoma ...
DONEAX tekinoroji yakaswededza UV disinfection robhoti yakatorwa neSenzhen Health Supervision Bureau
Coronavirus hutachiona yave ichipararira kwenguva yakareba kwazvo, uye kudzivirira kwesainzi uye kutonga kwave iko kwekutanga pakati pezvakakosha. Musi waNdira 31, 2020, Shenzhen Municipal Health Supervision Bureau yakakurumidza kuendesa iyo pulsed ultraviolet disinfection muchina inogadzirwa neShenzhen DON ...
DONEAX disinfection akateedzana zvigadzirwa zvinopinda mune ultrasound mushonga department reyunivhesiti yechisere yeCUHK kubatsira chipatara kubata pfungwa!
Iyo kamwe kamwe nyowani corovavirus denda zvakare yakaisazve chipatara hutachiona kutonga mune yakakosha chinzvimbo chekuvandudza. Seyakajairika yekuongorora michina mumasangano ekurapa, yekurapa ultrasonic probe inowanzo kutaurirana neganda kana mucous membrane yevarwere zvakananga uye ine hombe nu ...
Changsha Kuvaka Expo kwakabudirira kubatwa, uye DONEAX kupomba disinfection robhoti yakabatsira kuratidzwa mukudzivirira kwehosha!
PaMay 15-17, iyo yegumi nembiri China (Changsha) nyowani yekuvaka zvigadzirwa zvekudyara kusimudzira uye yese imba kugadzirisa Expo (inozodaidzwa kunzi Changsha Kuvaka Expo) nemusoro wenyaya we "hunyanzvi, kushandira pamwe uye kuhwina-kuhwina budiriro" yakaitirwa muChangsha International ...
Kushanda kwepulsed ultraviolet disinfection robhoti mune inouraya disinfection yechipatara
Terminal disinfection inzira inoshanda yekubvisa utachiona hwehutachiona hwehutachiona uye denda nzvimbo. Sekureva kwenoverengera coronavirus pneumonia control plan uye nhungamiro, yakakwana yekuuraya disinfection chiyero chinofanira kuitwa mushure mevatsva coronavirus mabayo pneumonia uye ...